Madaxweynaha Somaliland oo Cafis u fidinaya ku dhawaad 1000 Maxbuus – Radio Baidoa
By Webmaster	 On Mar 28, 2020
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa la sheegay inuu warqad ku saabsan cafiska 800 oo maxbuus u gudbiyey Hay’addaha Garsoorka, sida Xeer-ilaalinta, Wasaaradda Cadaaladda iyo Ciidanka Asluubta, si ay uga soo talo bixiyaan maxaabista cafiska loo fidinayo iyo maxbuus walba wuxuu ku xiran yahay, si looga taxadiro xanuunka dunida aadka ugu faafay ee coronavirus.
Warbaahinta Somaliland ayaa ku warantay in Madaxweynaha uu go’aan ku qaatay in laga hortaggo Coronovirus.
Madaxweynuhu uu cafiska ugu fidinayo Maxaabiista, isla-markaana waxaa la sheegay inay warqadan uu Madaxweynuhu ku amray in aan cafis u fidin maxaabiista u xidhxidhan kiisaska cul-culus sida Maxaabiista u xidhan ka ganacsiga khamriga, budhcad-badeeda, argagaxisada, kufsiga iyo dilalka iyo kiisaska la midka ah.
Ciidanka Asluubtu ayaa khamiistii u gudbiyey Xeer-ilaalinta iyo Wasaaradda Cadaalada liiska Maxaabiista la filayo inuu Madaxweynuhu cafiska u fidiyo, iyo maxbuus kastaaba wuxuu u xidhan yahay, waxaana la filayaa in ilaa maanta ilaa beri uu Madaxweynuhu cafis u fidiyo 800 oo maxbuus oo ku kala xidhan jeelasha iyo xabsiyada kala duwan ee dalka.
Dadkii ugu horreeyey oo u dhintay Coronavirus Koonfur Afrika
Somaliland oo aan qeyb ka aheyn qorshaha deynta cafinta Soomaaliya